कोभिड–१९ को सङ्क्रमण देशभरि बढीरहँदा कस्तो मास्क, कसरी लगाउने – समावेशी
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण देशभरि बढीरहँदा कस्तो मास्क, कसरी लगाउने
आइतबार, भाद्र २१, २०७७ | १७:४१:४० |
काठमाडौँ, । “कार्टुन लगायतका उनीहरूलाई रमाइलो लाग्ने चित्रहरू मास्कमा राख्दा त्यो मन पराएर साना बालबालिकाले मास्क लगाउन सक्छन्” जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ डा. रविन्द्र पाण्डेले भन्नुभयो, “किशोरकिशोरीका फेन्सी खालको छुट्टै डिजाइनको मास्क रुचिकर हुनसक्छ ।” विश्वव्यापी रुपमा फैलिइरहेको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि मास्कको प्रयोग बढाउन व्यक्तिको उमेर, पेशा र रुचिअनुसारको मास्कको उत्पादनले सहयोग गर्ने डा. पाण्डेले बताउनुभयो । खेलप्रेमीका लागि खेलाडीको फोटो भएको त अरुका लागि सगरमाथा वा नेपालका सम्पदाको फोटो राखेको मास्क हुँदा उनीहरू खुशी हुनेछन् । ज्येष्ठ नागरिकलाई भगवानको फोटो हुँदा रुचिकर हुनसक्ने उहाँको तर्क छ ।
एन ९५ वा के ९५, सर्जिकल र कपडाको मास्क गरी अहिले बजारमा तीन किसिमका मास्क पाइन्छ । तीमध्ये एन ९५ माक्स भल्भ भएको र नभएको पनि बजारमा उपलब्ध हुने गरेको छ । सर्जिकल माक्सभन्दा कपडाको बढी प्रभावकारी हुन्छ । एन ९५ वा के ९५ अस्पतालको लागि डिजाइन गरिएको माक्स हो । अरु मास्कको तुलनामा महङ्गो पर्ने भएकाले आमनागरिकले एन ९५ लगाउन जरुरी नभएको डा. पाण्डेको भनाइ छ । यो धोएपछि कसिलो नहुने भएकाले धेरै धुन मिल्दैन । त्यस्तै, भल्भ भएको मास्क सास फेर्न र कुरा गर्न सजिलो भएपनि सङ्क्रमितले यो लगाउँदा अरुलाई सर्न सक्ने सम्भावना छ । उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो मास्कको प्रयोग आमनागरिकले नगरेकै राम्रो हो ।”
सरकारले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरेको छ । नेपाल प्रहरीले सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण ऐनका आधारमा काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्म २८ हजार ३०६ जनालाई कारवाही गरेको महानगरीय प्रहरी कार्यालका प्रवक्ता सुशिलकुमार यादबले बताउनुभयो । उपत्यकामा मास्कको प्रयोग क्रमिक रुपमा बढिरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले कारवाही बढाएकाले पनि यसको प्रयोग बढी मात्रामा भइरहेको हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ ।” सञ्चिता घिमिरे